Inona no azon'ny plugins Wordpress atao aminao? | Fifamoivoizana hiara-miasa
by on Jona 4, 2021
Inona no afaka WordPress Ny plugins dia mety aminao?
Ny fiasan'ny WordPress dia nanokatra fahafaha-tsy manam-petra tato ho ato, mitondra azy any amin'ny ambaratonga vaovao izay tsy voafetra intsony amin'ny tranokala bilaogy. Miaraka amina karazana plugins WordPress marobe atolotra ankehitriny, ary betsaka kokoa ny fampidirina tsy tapaka, ny tompona tranokala dia afaka mametraka pejy noforonina namboarina tao anatin'ny roa minitra miaraka amin'ny fanampiana kely.
Ny plugins WordPress dia script natsangan'ny mpamorona marobe hanome safidy bebe kokoa ho an'ny mpampiasa ny pejin-tranonkala. Ny plugin WordPress dia azo ampiasaina hanehoana fanamarihana ankehitriny, na ho fitaovana fisorohana spam. Ny modely famolavolana WordPress dia miseho ho malaza amin'ny tranokala fampiantranoana ivelany, noho izany ny fananana fahaizana mampiditra asa bebe kokoa dia mahatonga ny plugins WordPress ho loharanom-pahalalana tena ilaina amin'ny programa maimaimpoana tanteraka!
Raha maro ny olona nanangana pejy tranokala WordPress hizara tantara ara-tsosialy sy isam-batan'olona, fitorahana bilaogy dia niafara tamin'ny ampahany lehibe tamin'ny sehatry ny varotra sy ny promo. Miaraka amin'ny tranonkala iray natokana tsy miankina, ny mpampiasa WordPress dia mety misy rohy marketing na Adsense, ary hampiroborobo ireo singa afiliana. Ny plugins WordPress dia manome fitaovana manokana hanamboarana ireo karazana tranonkala ireo, miaraka amin'ny add-on amin'ny karazana fanasokajiana ahitana:
VAKIO IZANY Tokony hividy fifamoivoizana kendrena ve ianao?
 fitantanana Adsense
 Rotatera dokam-barotra
 Fanatsarana motera fikarohana
 Fepetran'ny mpampiasa sy ny solon'izay tenimiafinao
 Mpamangy ary tsindrio stats
 boaty fikarohana
 Fitaovana fanarahana
 Tondro tsoratadidy ara-tsosialy (oh: Technorati, Del.icio.us, Digg).
Fanamarihana iray momba ny WordPress.com sy WordPress.org.
Na dia tranokala WordPress maimaim-poana maimaim-poana aza no hampiantranoina ao amin'ny WordPress.com, dia kely dia kely ny modely sy ny endrika famolavolana ary tsy avela hanana rohy marketing na Affiliate ny mpampiasa. WordPress.org etsy ankilany mila anao hanana ny fonenanao manokana sy fampiantranoana azy amin'ny toerana misy anao, na izany aza dia safidy tsara lavitra kokoa ho an'ny marketing sy marketing marketing, ary eto no miditra amin'ny endriny ny plugins WordPress!
Ny tompona tranonkala fampiantranoana irery dia afaka manao asa mora amin'ny famoronana tranokalany amin'ny plugins WordPress, mamorona pejy manokana namboarina hisarika ny mpitsidika azy!
Ny plugins WordPress dia script natsangan'ny mpamorona samihafa mba hanomezana safidy bebe kokoa an'ireo mpampiasa ho an'ny pejin-tranonkala. Ny modely famolavolana WordPress dia miseho ho malaza amin'ny tranokala fampiantranoana ivelany, noho izany ny fananana fahaizana mampiditra fiasa bebe kokoa dia mahatonga ny plugins WordPress ho loharanom-pahalalana tena mahasoa amin'ny fandaharana fiderana!
Ny plugins WordPress dia manome fitaovana miavaka amin'ny fanaovana manokana ireo karazan-tranonkala ireo, miaraka amin'ny add-on amin'ny karazany maro karazana izay misy:
Raha jerena fa misy plugins WordPress be dia be mifanaraka amin'ny karazana mpampiasa, ny haavon'ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fananganana ny sasany amin'ireo. WordPress.org etsy ankilany mila anao hanana ny fonenanao manokana sy fampiantranoana azy amin'ny toerana misy anao, na izany aza dia safidy tsara lavitra kokoa ho an'ny marketing sy marketing marketing, ary eto no miditra amin'ny endriny ny plugins WordPress!